Guddoomiyaha Gobolka Sool: “Hawsha ugu weyni hadda waa xoreynta iyo mideynta bulshada” (dhegayso) – Radio Daljir
Guddoomiyaha Gobolka Sool: “Hawsha ugu weyni hadda waa xoreynta iyo mideynta bulshada” (dhegayso)
Juunyo 14, 2018 12:04 b 0
Abubakar cRaxmaan Geelle, Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Sool, ayaa maanta wareysigii ugu horreeyey siiyey Radio Daljir. Guddoomiye Geelle ayaa Radio Daljir u sheegay in uu 2 maalmood Laascaanood moogyahay, magaaladuna aysan hadda Somaliland gacan ugu jirin.
“Magaalada waxaa hadda jooga 30 nin oo booliis ah oo aan xerada ka soo bixin,” ayuu yiri Guddoomiye Geelle. Asaga oo ku daray, “raggaasna hadda magaalada waa ka warwareegaan, oo shacabku waa dad hubeysan, diyaarna u ah xoreynta deegaanka.”
Waxaa wareystay wariye Axmed Sh. Maxamed “Tallman.”
Warka Arooryo iyo Xasan Heyka, Daljir Bossaso (dhegayso)
Caawa & Daljir iyo Axmed Shiikh Maxamed ‘Tallman’, Daljir Bossaso (dhegayso)